अस्थिरताको असर २८ वर्षमा २४ प्रधानमन्त्री र उनीहरुको कार्यकाल ? « Khasokhas Follow @khasokhasmag
अस्थिरताको असर २८ वर्षमा २४ प्रधानमन्त्री र उनीहरुको कार्यकाल ?
थापापछि प्रधानमन्त्री बनाइएका देउवालाई ०६१, माघ १९ गते राजा ज्ञानेन्द्रले दोश्रोपटक अक्षम घोषणा गरी बर्खास्त गरेका थिए ।राजा ज्ञानेन्द्र ( ०६१–०६३) ०६१ सालको माघ १९ मा शक्ति हत्याएका राजा ज्ञानेन्द्र आफै ०६३ वैशाख ११ गतेसम्म मन्त्रीपरिषद्को अध्यक्ष रहे । ०६२–०६३ सालको जनआन्दोलबाट संसद पुर्नस्थापना गरेपछि ज्ञानेन्द्रको शासन अन्त्य भएको थियो ।
नेपाल आजमा खबर प्रकाशित छ ।वर्तमान प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा ०४६ सालको परिवर्तन पछिका २४ औं प्रधानमन्त्री हुन् । निर्वाचनमा वाम गठबन्धनले बहुमत पाएकाले अब उनले राजीनामा दिनु पर्ने छ । वितेको २८ बर्षमा कुन प्रधानमन्त्रीले कसरी राजीनामा दिनुपर्यो भन्ने सन्दर्भ चाखलाग्दो छ ।